ဘုရားပန်း ကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ နှင့် ပန်းအိုး ဘယ်နှစ်အိုး ကပ်သင့်သလဲ..? – စှယျစုံသုတ
၁။ ပန်း ဘာကြောင့် ကပ်ရသလဲ..? ၂။ ပန်းအိုး ဘယ်နှစ်အိုး ထားသင့်ပါသလဲ..? ၁။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဇေတဝန်ကျောင်း ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်မှာ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ ရဟန်း ရှင် လူအများ ဘုရားဖူးတရားနာလာကြကုန်၏။ ခရီးကပမ်း လမ်းကကြမ်းသောကြောင့် ချွေးသီးချွေးပေါက် အသွယ်သွယ် ဖုန်အလိမ်းလိမ်းနှင့်ပေါ့။
တချို့မှာ ချွေးနံ့တထောင်း ထောင်းနှင့် ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်တခုလုံး အနံ့အသက်တွေကမကောင်း။ ဒါကို သတိပြုမိတဲ့ ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာစသော ရဟန်းရှင်လူတွေက ဘုရားနဲ့ တရားနာပရိသတ်အကြားမှာ ပန်းနံ့သာတွေကို ထားခဲ့ကြတယ်။ ဘုရားပန်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေဆီက ချွေးနံ့တွေ ဘုရားဆီမရောက်တော့ဘူးပေါ့။
တရားနာပရိသတ်တွေလည်း ပန်းနံ့လေးတွေရ ပန်းတွေကိုမြင်ပြီးအမောတွေပြေ စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်။ တရားနာရတာလည်း အရင်ကထက် ကြည်ကြည်နူးနူးရှိလာတယ် ။ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားပန်းလှူတဲ့ဓလေ့က စတင်လာတယ်။ ပန်းပန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မာလာဂန္ဓ ဝိလေပနဆိုတဲ့ သီလနဲ့လည်း ငြိစွန်းမှုမရှိတော့ဘူး အပြစ်ကင်းတယ်။
၂။ ပန်းအိုးဘယ်နှစ်အိုး ထားရမလဲဆိုတဲ့ အမေးမှာ နံပါတ် ၁ အဖြေက သက်သေဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစ်အိုးထားထား အပြစ်မရှိဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ ဘုရား ကျောင်းဆောင်နဲ့ လိုက်ဖက်သလိုထားနိုင်တယ်။ ၁အိုး ၃အိုးစသည်ဖြင့် မ ဂဏန်းထားမှ ၂အိုး၎အိုးစသည်ဖြင့် စုံဂဏန်းထားမှဟုဘုရားဟောမရှိခဲ့ဘူး။စုံ မ ခွဲပြီး လှူဒါန်းတာကဗုဒ္ဓဘါသာရဲ့ အယူအဆမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်အနေအထားကဘယ်နှစ်အိုးထားမှ တင့်တယ်မယ်ဆိုတာကိုချင့်ချိန်တတ်ဖို့အရေးကြီးသည်။
တချို့က ယတြာတွေ အဓိဋ္ဌာန်တွေကြောင့် အရေအတွက်အမျိုးမျိုးလှူကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲလှူလှူ ကုသိုလ်က ကုသိုလ်ပါပဲ။ ဘုရားပန်းတွေလန်းတော့ ဘုရားကျောင်း ဆောင်လည်း မင်္ဂလာကျက်သရေတိုးတာပေါ့။ တရားချစ်ခင် စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သော သူတော်စင် ပရိသတ်အပေါင်း ကပ်သုံးပါးနှင့်ဝေး၍ အမြတ်ဆုံးတရားနှင့်အေးပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာ လန်းဖြာကြပါစေ။
ဘုရားပနျး ကပျလှူခွငျးဖွဈပျေါလာပုံ နှငျ့ ပနျးအိုး ဘယျနှဈအိုး ကပျသငျ့သလဲ..?
၁။ ပနျး ဘာကွောငျ့ ကပျရသလဲ..? ၂။ ပနျးအိုး ဘယျနှဈအိုး ထားသငျ့ပါသလဲ..? ၁။ ဂေါတမ မွတျစှာဘုရားရှငျ ဇတေဝနျကြောငျး ဂန်ဓကုဋီတိုကျတျောမှာ သီတငျးသုံးတျောမူစဉျ ရပျဝေးရပျနီးမှ ရဟနျး ရှငျ လူအမြား ဘုရားဖူးတရားနာလာကွကုနျ၏။ ခရီးကပမျး လမျးကကွမျးသောကွောငျ့ ခြှေးသီးခြှေးပေါကျ အသှယျသှယျ ဖုနျအလိမျးလိမျးနှငျ့ပေါ့။
တခြို့မှာ ခြှေးနံ့တထောငျး ထောငျးနှငျ့ ဘုရားရှငျသီတငျးသုံးရာ ဂန်ဓကုဋီတိုကျတျောတခုလုံး အနံ့အသကျတှကေမကောငျး။ ဒါကို သတိပွုမိတဲ့ ညီတျောအရှငျအာနန်ဒာစသော ရဟနျးရှငျလူတှကေ ဘုရားနဲ့ တရားနာပရိသတျအကွားမှာ ပနျးနံ့သာတှကေို ထားခဲ့ကွတယျ။ ဘုရားပနျးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှဆေီက ခြှေးနံ့တှေ ဘုရားဆီမရောကျတော့ဘူးပေါ့။
တရားနာပရိသတျတှလေညျး ပနျးနံ့လေးတှရေ ပနျးတှကေိုမွငျပွီးအမောတှပွေေ စိတျတှကွေညျလငျလာတယျ။ တရားနာရတာလညျး အရငျကထကျ ကွညျကွညျနူးနူးရှိလာတယျ ။ထိုအခြိနျမှစ၍ ဘုရားပနျးလှူတဲ့ဓလကေ့ စတငျလာတယျ။ ပနျးပနျတာမဟုတျတဲ့အတှကျမာလာဂန်ဓ ဝိလပေနဆိုတဲ့ သီလနဲ့လညျး ငွိစှနျးမှုမရှိတော့ဘူး အပွဈကငျးတယျ။
၂။ ပနျးအိုးဘယျနှဈအိုး ထားရမလဲဆိုတဲ့ အမေးမှာ နံပါတျ ၁ အဖွကေ သကျသဖွေဈတယျ။ဘယျနှဈအိုးထားထား အပွဈမရှိဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ ဘုရား ကြောငျးဆောငျနဲ့ လိုကျဖကျသလိုထားနိုငျတယျ။ ၁အိုး ၃အိုးစသညျဖွငျ့ မ ဂဏနျးထားမှ ၂အိုး၎အိုးစသညျဖွငျ့ စုံဂဏနျးထားမှဟုဘုရားဟောမရှိခဲ့ဘူး။စုံ မ ခှဲပွီး လှူဒါနျးတာကဗုဒ်ဓဘါသာရဲ့ အယူအဆမဟုတျပါဘူး။ မိမိရဲ့ဘုရားကြောငျးဆောငျအနအေထားကဘယျနှဈအိုးထားမှ တငျ့တယျမယျဆိုတာကိုခငျြ့ခြိနျတတျဖို့အရေးကွီးသညျ။
တခြို့က ယတွာတှေ အဓိဋ်ဌာနျတှကွေောငျ့ အရအေတှကျအမြိုးမြိုးလှူကွတယျ။ ဘယျလိုပဲလှူလှူ ကုသိုလျက ကုသိုလျပါပဲ။ ဘုရားပနျးတှလေနျးတော့ ဘုရားကြောငျး ဆောငျလညျး မင်ျဂလာကကျြသရတေိုးတာပေါ့။ တရားခဈြခငျ စိတျကောငျးဝငျကွကုနျသော သူတျောစငျ ပရိသတျအပေါငျး ကပျသုံးပါးနှငျ့ဝေး၍ အမွတျဆုံးတရားနှငျ့အေးပါစေ။ကိုယျစိတျနှဈဖွာကနျြးမာခမျြးသာ လနျးဖွာကွပါစေ။